Okwamanje: Phatha kalula ukuhambisana kwamasayithi nezinhlelo zakho zokusebenza | Martech Zone
Okwamanje: Phatha kalula ukuhambisana kwamasayithi nezinhlelo zakho zokusebenza
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 1, 2020 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 1, 2020 Douglas Karr
Ngokuyimfihlo kwedatha esezingeni likahulumeni nokuhambisana okuvela kufayela le- Umthetho Wokuvikelwa Kwabathengi waseCalifornia, ikusasa lokuthotshelwa komthetho ngaphakathi nangaphandle komhlaba liba yinqwaba yemithetho engenangqondo. Ungangitholi ngephutha, angiphikisani nomthetho lapho izinkampani ziqhubeka nokuketula nokuhlukumeza idatha yabathengi.
Ukulindela ukuthi ibhizinisi elincane, lomhlaba wonke lihambisane ne-isn 'nje elidla isikhathi futhi elibizayo, kungalimaza ibhizinisi. Ikakhulu uma siqala ukwehla ngomgwaqo wombuso ngamunye unemithetho yawo. Lesi ngesinye salezo zimo ezidinga okuvunyelwene ngazo, indinganiso yamazwe ngamazwe yobumfihlo nokusetshenziswa kwedatha.
I-termly isevisi yokusiza izinkampani ukuthi zigcine kahle izicelo zazo namawebhusayithi ahambisana nayo yonke imithethonqubo ibhizinisi elifanele ukuyilandela.
Ukuqhuba ibhizinisi kudinga ukuthi uhambisane nemithetho ehlukahlukene, imithetho, kanye nemihlahlandlela yabahlinzeki bezinsizakalo. Kuyinkinga nobungozi ukuzama ukulandela yonke le mithetho uwedwa. Isikhathi singasiza ukwehlisa umthwalo wokuthotshelwa komthetho futhi sikunikeze nokuthula kwengqondo.
Le sevisi ifaka phakathi kokubili iplatifomu yokuthunyelwa yokugcina imigomo yakho nezitatimende zobumfihlo zisesikhathini kanye nezeluleko zezomthetho zokuqinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho liyahambisana. Okwamanje kuhlanganisa:
Isixazululo semvume ye-All-in-One Cookie
Isihloli Samakhukhi - Isihloli samakhukhi samahhala se-Termly sihlola iwebhusayithi yakho ngamakhukhi futhi sikusize ukuhlukanise ukuhambisana kwe-GDPR ne-Cookie Law ngemizuzu.
I-GDPR Cookie Banner - Qoqa kalula imvume yomsebenzisi futhi uhlale uhambisana ne-GDPR ne-ePrivacy Directive nge-banner yemvume yekhukhi eyenziwe ngokwezifiso ngokugcwele.
Khiqiza Inqubomgomo Yakho Yamakhukhi
Imigomo Nemibandela eku-inthanethi
Yenzelwe Ibhizinisi Lakho - Yenza imigomo nemibandela eyenzelwe ibhulogi yakho, iwebhusayithi, uhlelo lokusebenza, i-SaaS, noma isayithi le-ecommerce. Sungula imihlahlandlela namalungelo epulatifomu yakho.
Yenza ngokwezifiso - Musa ukuhlangabezana nemibandela ejwayelekile lapho ungenza ngokwezifiso ukubukeka nokuzwakala kwemigomo yakho ukufana nesitayela esiyingqayizivele sewebhusayithi yakho noma uhlelo lwakho lokusebenza.
Ukusingathwa Kwamahhala Kwewebhu - Isikhathi sizosingatha imigomo nemibandela yakho mahhala! Vele ubeke isixhumanisi kusayithi lakho ukwenza imigomo nemibandela yakho itholakale kubasebenzisi.
Khiqiza Imigomo Nemibandela Yakho eku-inthanethi
Umakhi Wenqubomgomo Yobumfihlo
Amapulatifomu Amaningi - Noma ngabe usebenzisa ibhulogi, isiza se-ecommerce, uhlelo lokusebenza lwe-iPhone, uhlelo lokusebenza lwe-Android, noma uhlelo lokusebenza lwe-Facebook, i-generator yenqubomgomo yobumfihlo ye-Termly inebhizinisi lakho elihlanganisiwe.
Ukuthobela i-GDPR - Dala inqubomgomo yobumfihlo eyenzelwe ukuhlangabezana nemihlahlandlela ye-GDPR, kanye ne-Google Play, i-Analytics, i-Adsense, i-App Store, nokuningi!
Ukuvuselelwa okuzenzakalelayo - Noma nini lapho kuphuma umthetho omusha, iqembu labameli le-Termly lizovuselela ngokuzenzakalela inqubomgomo yakho yobumfihlo, liqinisekise ukuthi uhlala uthobela njalo.
Khiqiza Inqubomgomo Yakho Yobumfihlo
Umenzi Wokuzikhipha Emthethweni Osemthethweni
Yenzelwe Ibhizinisi Lakho - Noma ngabe iyiphi inqubomgomo yokudalula oyidingayo - kusuka kumushwana wokuzikhipha emthwalweni noma ohlangene kuya kusitatimende sebhulogi esiyisisekelo - I-generator yamahhala ka-Termly uyimbozile.
Yenza ngokwezifiso - Sebenzisa izinketho zesitayela seThemly ukwenza ngezifiso isitatimende sakho sokuzihlangula ukufanisa ukubukeka nokuzwakala kwebhizinisi lakho, ibhulogi, noma uhlelo lwakho lokusebenza, ngakho-ke ukufaka uphawu kophawu lwakho kuhlale kusesilinganisweni.
Kulula ukufaka - Gwema isikweletu esisemthethweni nezikhalazo ngokwenza inqubomgomo yakho yokudalula ifinyeleleke kalula. Mane unamathisele isixhumanisi ukwengeza ikhasi lakho lomshwana wokuzikhipha emthwalweni kusayithi lakho.
Khiqiza Umshwana Wakho Ukuzikhulula Emthethweni
Imbuyiselo kanye ne-Return Policy Generator
Yenzelwe Ibhizinisi Lakho - Abakhiqizi benqubomgomo yokubuyisa yeThemly bavumelanisa inqubomgomo ngayinye ngqo kwipulatifomu yakho, noma ngabe usayizi, uhlobo, noma indawo yebhizinisi olisebenzisayo.
Yenza ngokwezifiso - Musa ukudela umkhiqizo wesitolo sakho - Isethi ye-Termly yezinketho zokwenza ngokwezifiso ikuvumela ukuthi uqondanise ukubukeka nokuzizwa kwenqubomgomo yakho yokubuyiselwa imali ebhizinisini lakho.
Kulula ukufaka - Ukunikeza amakhasimende inqubomgomo ephelele ekuthumeleni kwakho, ukushintshana, ukubuyisa, nokubuyiselwa kwemali kulula njengokunamathisela isixhumanisi kusayithi lakho.
Khiqiza Inqubomgomo Yakho Yokubuyiselwa Imali Nokubuyisa
Ukudalulwa: Singabanxusa be- Okwamanje